Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Safarrada Bikrada Hadda waxay u shiraacayaan Nassau iyo Bimini
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • saaciday inay • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Safarrada Virgin ee Bahamas
Iyada oo tallaaladu sii kordhayaan iyo xannibaadaha safarka ayaa kor u kacaya adduunka oo dhan, khadadka safarka ayaa si buuxda ugu soo laabanaya xeebaha Kariibiyaanka. Virgin Voyages 'Scarlet Lady, oo ah safar cusub oo raaxo leh, ayaa bilawday xilli-guurkeedii “caleema-saarka” ee Kariibiyaanka, iyadoo markii ugu horraysay ka samaysay Bahamas oo leh afar habeen “Dab iyo Qorrax-dhaca Soirées,” oo ay ku jirto joogsiga Naadiga Xeebta ee Bimini. Toddobaadkii la soo dhaafay xaflado lagu daahfurayay ayaa lagu qabtay caasimadda iyo Bimini, halkaas oo Ra'iisul Wasaare Ku -Xigeenka ahna Wasiirka Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada I. Chester Cooper iyo Agaasimaha Guud Joy Jibrilu ay ku soo dhaweeyeen qadka tareenka xeebaha Jasiiradaha Bahamas.
Safarrada toddobaadlaha ah waxay si togan u saamayn doonaan dhaqaalaha maxalliga ah.
Lady Scarlet waxay safarro toddobaadle ah ku tagi doontaa Bimini iyo Nassau toddobada bilood ee soo socota, laga bilaabo Oktoobar 2021 illaa Maajo 2022.
Khadka safarku wuxuu u baahan yahay tallaal buuxa martida iyo shaqaalaha labadaba. Rakaabka ayaa sidoo kale laga baari doonaa Covid-19 ka hor intaan la fuulin, oo ah kharash ay dabooshay khadadka dalxiiska.
Intii lagu guda jiray xafladda daahfurka ee Bimini, Ra'iisul Wasaare Ku -xigeenka Cooper wuxuu muujiyey rajadiisa ku aaddan kobaca dhaqaalaha isagoo tixgelinaya iskaashigan cusub. “Safarrada toddobaadlaha ah waxay si togan u saamayn doonaan dhaqaalaha maxalliga ah, martida dalxiiskuna waxay la kulmi doonaan dhammaan farxadaha maalin ee jasiirad yar oo kulaylaha ah, laga bilaabo ku raaxaysiga fiditaan aad u qurux badan oo ah boodh-jilicsan, xeebta ciidda cad, ilaa safarada qaadanaya kalluumeysiga ciyaarta weyn, quusidda badda dhexdeeda, kaxeysiga, iyo dhexgalka dolphins-ka, ”ayuu yiri Ku-xigeenka Ra'iisul Wasaare Cooper.
Agaasimaha Guud Joy Jibrilu ayaa ka dhawaajiyay dareenkii Ra'iisul Wasaare Ku -xigeenka Cooper xafladii furitaanka ee lagu qabtay Nassau, "Virgin Voyages itineraries oo ay ka muuqato maalin Nassau iyo maalin Bimini ah ayaa u oggolaan doonta in ka badan 2,700 martidaada ah inay la kulmaan dhadhan Bahamas The sida ay sahamiyaan qaar ka mid ah Bahamas'Goobaha taariikhiga ah ee soojireenka ah iyo meelaha soojiidashada leh oo aan la falgalno dadkeena diirran ee martida ah. ”
Markabka dadka waaweyn oo kaliya ayaa qaada 2,770 rakaab ah (oo ay ku jiraan shaqaale) iyo 24 goobo cunto iyo cabitaan. Markabka ayaa sidoo kale leh goobo badan oo munaasabado ah, casino aan qiiqa lahayn, arcade, xarun jimicsi oo laba meelood ah iyo waxyaabo kaloo badan.
The Lady Scarlet waxay safarro toddobaadle ah ku tagi doontaa Bimini iyo Nassau toddobada bilood ee soo socota, laga bilaabo Oktoobar 2021 illaa Maajo 2022. Iyadoo la dhowrayo qawaaniinta Covid-19 iyo si loo sugo amniga, khadka safarka ayaa u baahan tallaallo buuxa oo loogu talagalay martida iyo shaqaalaha labadaba. Rakaabka ayaa sidoo kale laga baari doonaa Covid-19 ka hor intaan la fuulin, oo ah kharash uu daboolay khadka dalxiiska. Borotokoollada caafimaadka ee saaran markabka waxaa ka mid ah fayadhowrka, fogeynta jirka, degganaanshaha xaddidan iyo meelmarinta tilmaamaha dowladda hoose meel kasta oo la tago.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan safarrada Virgin Voyages, booqo virginvoyages.com.